बालुवाटारको बैठक छोडेर किन आए प्रचण्ड पेरिसडाँडा ? « Niatra TV
बालुवाटारको बैठक छोडेर किन आए प्रचण्ड पेरिसडाँडा ?
काठमाण्डौ,बैशाख ५ । नेकपामाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहालले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । सोमबार पार्टी कार्यालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा महानगरपालिका र उपमानगरपालिकामा मेयरको भागबण्डाको बिषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु भयो ।